गौरीगंगामा हामी जित्नेमा ढुक्क छौं– देउवा « Anumodan National Daily
गौरीगंगामा हामी जित्नेमा ढुक्क छौं– देउवा
प्रकाशित मिति : ९ असार २०७४, शुक्रबार १५:२६
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा नेकपा (एमाले)ले व्यावसायी तथा युवा उम्मेदवार भीम देउवालाई मेयर पदको उम्मेदवार बनाएको छ । व्यवस्थित योजना बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका एमालेका मेयर पदका उम्मेदवार देउवासंग ईअनुमोदनका लागिसम्पादक प्रकाशविक्रम शाहले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
– तपाई व्यावसायी पृष्ठभूमिबाट एकाएक राजनीतिमा लागेर मेयरको उम्मेदवार हुनुभयो । कसरी अघि बढिरहनु भएको छ ?
म व्यवसायी हुँ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सचिव भइसकेको छु । साथसाथै एमालेमा आवद्ध भएर काम गरिरहेको थिए । स्थानीय तहको चुनाव हुने चर्चासंगै साथीहरूले चुनाव लड्ने सल्लाह दिनुभयो । अर्कोतिर व्यवसायीदेखि विद्यालय व्यवस्थापन र सामुदायिक वन क्षेत्रमा मेरो काम हेरेर जिताउन सजिलो हुन्छ भन्ने ठान्नु भएर चुनाव लड्न प्रेरित गर्नु भएको होला । यस क्षेत्रका म भन्दा पुराना नेताहरू पदमसिंह सिङाल, वीरबहादुर मन्नी, बासुदेव गुरागाई जस्ता अग्रजले मलाई अगाडि बढाउनुभयो । उहाँकै साथ सहयोगले चुनावी प्रचारमा छु । सबै घर, टोल, बजारमा जनतासंग मत मागिसकेको छु ।
– मतदातालाई आकर्षित गर्ने तपाईका योजना र मुद्दा के–कस्ता छन् ?
मैले मुख्यरूपमा अव्यवस्थित वसोवासलाई व्यवस्थित गरेर मुक्त कमैया, सुकुम्वासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने, विपन्नलाई रासन कार्ड वितरण गरेर प्रत्येक वडामा सुपथ साझा सहकारी पसल स्थापना गर्ने, अव्यवस्थित शहरीकरणलाई नगर गुरुयोजना निर्माण गर्ने, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कृषक पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने, दश किसान एक ट्यूवेल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिलाई आधुनिकरण गर्ने, कोल्डस्टोर स्थापना गर्ने, कृषकलाई अनुदान दिने, मल विउविजन सुपथ मूल्यमा दिन विउविजन केन्द्र स्थापना गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र स्थापना गरेर कृषकका उत्पादन उचित मूल्यमा खरिद गर्ने योजना बनाएका छौं । यस्तै प्रत्येक वडाका गाउँटोल जोड्न कल्र्भट, पुल निर्माण गरेर चक्रपथ तयार गरेर नगर यातायात सञ्चालन गर्नेछौं । सडकहरू क्रमिकरूपमा मापदण्ड अनुसार कालोपत्रे गर्ने र ढलनिकास गर्ने योजना छ । नगरका विकास निर्माण कार्यमा महिला सहभागिता अनिवार्यरूपमा ५० प्रतिशत पुगाउने छौं ।
– शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाईका क्षेत्रमा कस्ता काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थित गरेर गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेछौं । सामुदायिक विद्यालयको अवस्था हेरेर प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षालयको व्यवस्था गर्नेछौं । प्राविधिक शिक्षामा छात्राहरूलाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिनेछौं । मसुरिया, चौमाला र उदासीपुर क्षेत्रका एकएक विद्यालय छनौट गरेर जनतासंग साझेदारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्नेछौं । प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य बनाइने छ । खप्तड र चौमाला वहुमुखी क्याम्पसलाई अझ प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नेछौं । सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना गर्नेछौं । थारू बहुल क्षेत्रमा थारूभाषाको पठनपाठनलाई प्राथकिता दिइने छ । बालबालिका र युवालाई विभिन्न कुलतवाट मुक्त बनाउने शैक्षिक कार्यक्रम ल्याइनेछ । मसुरिया र चौमालाका स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नती गरिने छ । लामो समयदेखि क्रियाशिल स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई मासिक तलब दिने व्यवस्था गर्नेछौं ।
– प्राकृतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा के काम गर्न आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?
ताल तलैया, मठ मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्नेछौं । थारू संस्कृतिका होमस्टे सञ्चालन गर्ने सवै जातजातिका संग्राहलय स्थापना गर्ने योजना छ । यी कामले आन्तरिक र वाह्य पर्यटक बढनेछन् जसले रोजगारीका साथै नगरको आम्दानी बढ्नेछ । आम्दानी बढ्दा विकासका काम गर्न सजिलो हुनेछ । लिक्मा, कटैनी, गौरीगंगा, अण्डैया, शिवगंगा, चौमाला नदीमा वृहत वृक्षारोपण गर्नेछौं । मटकौना, गौरीगंगा र शिवगंगामा व्यवस्थित शवगृह निर्माण गर्नेछौं । सुन्दर ठाउँमा वनभोज स्थलहरू बनाउने छौं ।
– तपाईका योजनाबारे जनताको के प्रतिक्रिया छ ?
जनताको हामीमाथि भर र विश्वास छ । हामीले वृद्धवृद्धालाई घरघरमै भत्ता पुगाउने छौं । युवाहरूलाई विदेश जान रोक्ने कार्यक्रम ल्याउने छौं । जनताको कर जनताकै विकास भन्ने नारा जनताले निकै रुचाएका छन् । हामीले जनतालाई सूचना दिन एफएम रेडियो र टेलिभिजन पनि सञ्चाल गर्ने भएकोले त्यसले पनि रोजगारी र आम्दानी बढाउने छ । द्वन्द्वपीडित, अपांग, दलित र पिछडिएका समुदायका लागि स्वरोजगारमूलका कार्यक्रम ल्याउने वचन जनतालाई दिएका छौं । सहारा नभएका वृद्धवृद्धा र बालबालिकाका लागि आवास गृह निर्माण पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ । खेल मैदान, कभर्डहल बनाउने छौं । बाल उद्यान पनि हाम्रो योजनामा छ । जनताको सुरक्षाका लागि नगर प्रहरीको गठन गरिने छ । फोहरलाई व्यवस्थापन गरेर जैविक मल वनाउने स्थायी व्यवस्था गर्ने योजना पनि छ ।
– धेरै योजना बनाउनु भएको रहेछ जित्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
गौरीगंगामा नगरपालिकामा हामी जित्नेमा म ढुक्क छु । एमालेको देशव्यापी लहर एकातिर छ अर्कोतिर एमालेले विगतमा गरेका राम्रा काम जनताका मनमनमा छन । अहिलेको नगरमा पर्ने पहिलेका गाविसमा पनि एमालेले जितेको हो । राजनीति गरेको, शैक्षिक क्षेत्र, सामुदायिक वन र व्यवसायमा पनि लागेकोले होला मलाई आम जनताले चिनेका छन । फेरि उपमेयरदेखि वडा अध्यक्ष र सदस्यसम्म हाम्रा उम्मेदवार समावेशी छन् ।